"Fasaadka Hogaaminta Gala Ayaa Ugu Khatarsan, Dadkuna Iyaga Ayey Ku Deydaan"Sheekh Dirir.
Friday February 05, 2021 - 21:41:36 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa ku baaqay in dadka waanada iyo wax-u-sheegu anfaci waayo, muhiim tahay in hogaanku gacan bir ah ku qabtaan, oo waa waslad liidatee, mujtamaca laga qabto.
Khudbadii Jimcaha maanta oo kaga hadlay halista dhulka oo la fasahaadiyo ayaa sheegay in Quraanku inna barayo in xumaanta kuwa u waaweyn uu fasaadku ka mid yahay. Fasaadka culimadu marka ay sharaxayaan waxay ku sheegaan in manfacii shay lahaa dhib loo rogo. Shay walba dhib iyo dheef ayuu leeyahay, waxaanu yidhi,
"Dalka, dadka iyo duunyada waxii dheef ay lahaayeen oo dhib loo rogo. Iyadoo neerfaha iyo awooda dadka xumaan-falayaashu xoog badato. Markaa shaygii si wanaagsan loo isticmaali lahaa, si xun loo bedelo.
"Quraanku ila akonton aayadood ayuu fasahaadka kaga hadlaa, afartan ka mid ah waxa la xidhiidhsan ereyga dhulka, dadka Ilaahay SW waxuu u diiday in dhulka la baabi’iyo, taasoo keenaysa in dadka iyo duunyaduna xumaadaan. fasaadku ummada raasamaalkeeda u weyn ee dalka ayuu ka kharaabiyaa.
"Ilaa lix macne ayaa ku soo arooraysa, marka la is-raaciyo dadku dhibaatada ay geysteen iyo raadka ay reebayso. Mararka qaarkood ayey noqonaysa amacsida ay dadku geystaan, dilalka, dulmiga iyo gardaradda, sixirka iyo xumaantiisa, waxyaalahaasi waa dhibka dadku geystaan.
"Quraanku waxuu inoo sheegaya in waxa dadka fasahaadiya ka mid tahay raacitaanka hawadda ama rabitaankiisu hago. Ilaahay SW ayaa aayad inoogu sheegay ‘Hadii xaqu raaci lahaa rabitaanka, dad iyo dhulba wuu fasaadi lahaa. Inta badan qofka wax khariba waxa u sabab ah raacitaanka hawadiisa, taasina waa waxa dadka iyo dalku ku halaagsamaan.”
"Casrigan Gaaladu marka ay wax tirakoobayaan, waxay ka waramaan fasaadka maalka, akhlaaqda, siyaasadda, maamulka, markaa caalamka Islaamka iyo Afrika ayey xaga dambe mariyaan, soomaalidana xaga sii dambaysa. Waa nasiibdarro in dadka muslimiinta loogu faanayo waa wax fasahaadiyaal, gaaladuna wax hagaajiyaal. Ha aqofku hadaanu imaan lahayn waa mufsid,
"Dadku hadaanay diinta ku dhaqmayn, oo dawladooda isku xukumayn, xukuumad iyo shacab ma toosaan, fasaadkaasina dhaqan ayuu u noqdaa, sida Ilaahay Sw aayad inoogu sheegay ‘Waxa aan idin farayo ee raacida sharciga ah hadaydaan samayn, fitno ayaa iman doonta dhulka dhexdiisa, waxwalba way kharaabi doonaan. Aayad kale Ilaahay SW waxuu inoogu sheegay ‘Dadku hadii ay diinta Ilaahay SW ka sii jeestaan, waxaad u sheegtaa inay mufsidiin yihiin wax kharibaya, oon wax hagaajinayn, Ilaahayna SW wuu ogsoon yahay’. Qofku intuu sharciga Ilaahay Sw ku dhaqmayo waxuu u dhow yahay inuu wax hagaajinayo. Hadii qofku ama dadku saluugaan sharciga, islaax uma yimaadee, fasahaad ayey keentaa.
"Fasaadka waxa ka mid ah midka dhaqaalaha. Ummadihii Ilaahay SW halaagay qaar baa lagu halaagay dhaqaalaha oo ay ku xadgudbeen, sida Ilaahay SW aayad inoogu sheegay iyadoo qoom shucayb lala hadlayo ‘Dadku waxay leeyahiin haka nusqaaminina, dalkana ha kharibina. Markaa dadku inta ay diinta ku dhaqmayaan duunyada ayey hagaajinayaan, dadka ayey xaqooda siinayaan, hadii kale waxii duunyada gacanta ku dhiga.”
"Dadka wax fasahaadiya Ilaahay SW waxuu ku abaalmariyaa in waxqabadkoodu fashilmo, oo dadku ku heshiiyaan in wax la xumeeyo waa sida casriyadan dambe innagu badatee, dadku horumar diineed iyo mid aduunyo ma gaadhaan. Dadka haduu dhaqankoodu xumaado, shaqadoodu horumar ma yeelayo ayuu Ilaahay SW yidhi.
"Wacdiga iyo waanada wagaasan in sare loo qaado, oo hadday kuwii xumaanta u taagnaa kulmeen in dadka wanaaga u taagna is-uruursadaan, sida Ilaahay SW yidhi ‘Samafalka iyo wanaaga isu-kaashada, oo xadgudubka iyo xumaanta iska ilaaliya’